Hurumende Inoparura Homwe yeZW$17m Ichabatsira Vechidiki
Kirsty Coventry On Education In Harare On Fees
Gurukora rezvevechidiki, Muzvare Kirsty Coventry, vaparura homwe yemari inoita mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora emaRTGS, iyo ichabatsira masangano evechidiki pamwe nemabhizimusi evechidiki avati akavhiringidzwa kushanda kwawo nechirwere cheCoronavirus.
Vachiparura homwe iyi muHarare Muzvare Coventry chirongwa ichi chakanangana nekubatsira mukusimudzirwa kwemabhizimusi pamwe nemibatanidzwa inotungamirwa nevechidiki ayo vati anga ave kuwira pasi nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika kuri kukonzerwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose.
Vaenderera mberi vachiti vechidiki vanenge vachida mari idzi vanofanira kuvabata paWhatsapp nezvinyorwa zvavo kana kuenda kumahofisi ebazi ravo ari mumatunhu avanogara sezvo vanhu vasiri kubvumidzwa kubuda mudzimba.
Vechidiki vanokodzera kupinda muchirongwa ichi vanofanirwa kunge vaine makore gumi nemasere kusvika pamakore makumi matatu nemashanu.
Vatiwo vechidiki ava vachapihwa mari isingadarike zviuru zvishanu zvemadhora ari maRTGS vachiti vanenge vatadza kukwana muchirongwa chavo vachazenge vachiendeswa kune mamwe mapazi ehurumende kuti vanobatsirwa ikoko.
Vati kugoverwa kuchange kuchiitwa mari idzi kuchange kuchiitwa pasina kupinzwa kwezvematongerwo enyika.
Izvi zvatambirwa nemutauriri weboka revechidiki muMDC inotingamirwa naVaNelson Chamisa, VaStephen Chuma, avo vati zvanga zvakanaka kuti mari iyi itange kupihwa vechidiki vasina mabasa vavanoti ndivo vari kunyanya kutambura.
Mutungamiri webato reLabour Econimists and Afrikan Democrats, Muzvare Linda Masarira, vatiwo hurumende yanga ichifanira kucheuka vanhu vanga vachirarama nembasa emaoko kwete kutungamidza mberi vane mabhizimusi akapfumbira kare.
Muzvare Coventry vati vemabhizimusi akanangana nekurwisa chirwere cheCovid-19 akafanana nekugadzira sipo nemishonga inoshandiswa kugeza maoko, ndivo vachakosheswa zvikuru pakupihwa kwemari iyi.
Vatiwo mabhizimusi evechidiki avachapa mari mabhizimusi akanga akanyoreswa nechekare mwedzi mitanhatu nyika isati yavharwa nekuda kwechirwere che Coronavirus.